Misintona programa handrafitra t-shirt | Vaovao momba ny gadget
Misintona programa handrafetana T-shirt
Raha tianao ny manamboatra ny akanjonao manokana na te hanana ny akanjonao manokana, dia misy programa azo ampiasaina amboary ny lobanao.
Mora azo, avy amin'ny to download, ary apetraka. Ankoatr'izay, ity programa ity dia mamela anao hamolavola ny lamaodyo miaraka amin'ny maodely 3D. Izy io dia programa iray ahafahanao manokana ny maodelinao, na ny fanovana ny lokon'ny volo, ny makiazy, ankoatry ny zavatra hafa; ary ankoatry ny fahafahany misafidy ny karazana akanjo, maodely, loko, lamina sns. Izy io dia programa tena ilaina tokoa ho an'ireo olona te-hanao t-shirt ho azy manokana, na ho an'ny tenany, ny fianakaviany, hivarotra na hanome.
Izany rehetra izany sy ny zavatra hafa mety hahatratra antsika, misaotra Professional Fashion Professional, izay maimaim-poana ary tena ilaina amin'ireto tranga ireto. Ny toetra iray hafa manasongadina ity programa ity dia ao izy español Ka tsy ho mora kokoa aminao ny mahazo ny anao fampandehanana indray mandeha ao anatiny.
1 Fampiharana finday
2 Fandaharana ho an'ny solosaina
3 Pejy an-tserasera
4 Fomba famolavolana t-shirt
5 Ohatrinona ny famolavolana t-shirt?
Ny famolavolana t-shirt dia zavatra azontsika atao amin'ny finday ihany koa. Misy ny rindranasa ahafahana manao izany, noho izany dia safidy tsara hafa tokony hodinihina, satria ho an'ny mpampiasa maro dia tsotra kokoa ny mahay manao izany amin'ny findainy. Misy safidy roa azo alaina ao amin'ny Google Play, izay mety hahaliana amin'ity lafiny ity.
Ny voalohany dia ny Design ary manonta ny t-shirt anao, izay fampiharana tsotra somary tsotra izay ahafahana mamorona endrika te-shirt araka izay itiavantsika azy. Ho fanampin'izay, ahafahanao mamorona rakitra na endrika aoriana ihany izay azo atao pirinty atsy ho atsy, mba hanampiana antsika amin'ity fomba ity amin'ny fomba miavaka. Ny famolavolana ny fampiharana dia tsotra ary mandeha tsara. Azo sintonina maimaim-poana avy amin'ny Google Play:
Mamolavola sy manonta ny t-shirt anao
Etsy ankilany manana famolavolana T-shirt isika - Snaptee, izay mety ho ny malaza indrindra sy ny veterana amin'ity sehatra ity. Manome antsika ny fahafaha-mamolavola t-shirt manokana avy amin'ny rangotra. Afaka misafidy izay tadiavintsika amin'ity lafiny ity isika, amin'ny loko, lamina na famaranana. Araka izany, tsotra ny fanananao ny endriny. Afaka alaina maimaim-poana amin'ny Android izy io:
Volavola T-shirt - Snaptee
Developer: Snaptee voafetra
Fandaharana ho an'ny solosaina
Raha aleonao mamorona lobaka amin'ny solosainao, azo atao koa ny mampiasa programa sasany. Ny fiasan'izy ireo dia mitovy amin'ny iray ananantsika amin'ny telefaona finday, amin'ity tranga ity dia hampiasa programa amin'ny solosaina isika. Avelany izahay hanatanteraka ny fizotry ny famolavolana fampiharana manontolo, mba hahafahanay mankafy t-shirt 100% manokana.
Amin'ity tranga ity dia tsy dia malalaka loatra ny fifantenana, na dia misy programa mahaliana aza, inona ilay Mpamorona T-Shirt Desktop. Ity programa ity dia hahafahantsika mamorona t-shirt antsika manokana mora amin'ny solosaina. Azontsika atao ny manamboatra ny zava-drehetra momba ny endrika, mandra-pahatongantsika ilay tadiavintsika. Mora ampiasaina ary safidy tsara hodinihina.
Ity no safidy izay nitombo indrindra rehefa nandeha ny fotoana. Nihaona taminay pejy web maro ahafahana mamorona endrika ny T-shirt natokana ho azy. Ataovy fotsiny ny fikarohana Google hahitanao fa misy safidy maro azo atao amin'io lafiny io. Ankoatr'izay, ny fandidiana ao amin'izy ireo dia mitovy, noho izany dia tsy hanana olana be loatra isika amin'io lafiny io.
Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny Teespring, ny zavatra hitantsika ato amin'ity rohy ity. Eto amin'ity pejy ity isika dia afaka mamorona ny volavola tadiavintsika, misafidy ny karazan-t-shirt samy hafa, mamorona ny loko tiana hampiasaina ary koa ny lahatsoratra tiana hapetraka. Izany rehetra izany dia mamela famolavolana manokana 100%. Ho fanampin'izany, miankina amin'ny fanampiny izay ampidirintsika, dia azontsika atao ny mahita ny vidiny milaza fa ho lafo ny akanjo.
T-shirtimedia, ato amin'ity rohy ity misy, dia safidy iray hafa hodinihina amin'ity ampahan'ny tsena ity. Manome antsika ny fahafahana mamorona t-shirt araka izay itiavantsika azy. Tranonkala tsara izany raha mikasa hamorona singa maromaro izahay, toy ny mety hitranga raha toa ka ho an'ny tranga manokana, ohatra. Intuitive ampiasaina ary amin'ny vidiny tsara amin'ny ankapobeny.
Spreadshirt no tranonkala fahatelo nolazainay, izay safidy tsara hafa hodinihina. Hanome antsika ny fahafaha-mamorona endrika izay tadiavintsika amin'ny lobaka. Ho fanampin'izay, tranokala mora ampiasaina izy io, afaka mamorona tee-shirt ho an'ny karazan'olona (olon-dehibe na ankizy). Azontsika atao ihany koa ny misafidy ny zava-drehetra momba ny lobaka, toy ny fitaovana. Navela hamorona t-shirt ekolojika aza, izay azo antoka fa tena mahaliana. Safidy tsara, azonao vangiana eto.
Fomba famolavolana t-shirt
Matetika ny fizotrany dia mitovy amin'ny pejin-tranonkala rehetra. Tsy maintsy misafidy lafin-javatra sasany aloha, toy ny fitaovana tiana hampiasaina amin'ny lobaka sy ny lokony. Mba hahafahan'ny mpampiasa tsirairay misafidy ny safidy tadiavina. Misy pejy vitsivitsy izay misy loko maro kokoa, fa amin'ny ankapobeny dia tsy olana matetika izany.
Ny zavatra mahazatra dia avela hamorona lahatsoratra natokana ho azy hatrany, ao anatin'izany ny mety hisafidianana ny endri-tsoratra. Azontsika atao koa ny mampiditra sary na logo ao aminy, izay amin'ny tranga maro dia tsy maintsy ampakarintsika avy amin'ny solosaina, noho izany dia zava-dehibe ny fananana ilay rakitra voatahiry tiantsika hampiasaina amin'ity tranga ity. Na dia ny ankamaroan'ny pejy na programa dia misy singa azontsika ampiasaina ihany koa, raha te hampiditra endrika. Ny zavatra mahazatra dia tsy maintsy mandoa ny habetsaky ny singa ampiasainay ianao.
Amin'izany fomba izany, azontsika atao ny manamboatra ny endrik'ity lobaka ity amin'ny tiantsika amin'ny fotoana rehetra. Vantany vao vita dia tsy maintsy misafidy ny habeny sy ny singa tadiavintsika amin'ity lobaka ity isika, ary amin'izay dia ho fantatsika ny vidiny izay volavolan'ity endrika manokana ity. Ny pejy maro dia mazàna mampihena ny vidiny raha toa ka betsaka ny baiko omena azy.
Ohatrinona ny famolavolana t-shirt?
Tsy lafo ny famolavolana t-shirt. Ny ankamaroan'ny pejy dia miroso amin'ny sisin-tany mitovy, izay eo anelanelan'ny 10 sy 20 euro. Na dia miankina amin'ny singa maro aza izy io, izay ho vidiny farany amin'ny akanjo voalaza. Amin'ny lafiny iray, ny fitaovana ampiasainay dia manapa-kevitra, satria ny sasany lafo kokoa, indrindra raha miloka lobaka ekolojika isika, satria avelan'ny magazay sasany.
Mety hisy fiantraikany ihany koa ny loko, satria ny loko sasany dia sarotra kokoa ny mamokatra ary misy pejy izay miakatra bebe kokoa. Saingy matetika izy ireo dia tsy fahasamihafana lehibe eo amin'io lafiny io. Tamin'ny farany, ireo singa ampiasainay, toy ny sary, sary masina, logo sns.. Midika izany fa ny vidin'ny lobaka voalaza dia mety ho ambony kokoa. Ny pejy sasany dia andoavam-bola isaky ny entana, ary ny hafa kosa indray mandoa anay. Samy manana ny rafitra misy azy avy.
Ireo dia lafiny iray mandray anjara amin'ny vidiny, saingy aza atao lafo indrindra. Ny famolavolana t-shirt dia zavatra azon'ny paosy rehetra atao. Noho izany, raha mieritreritra ny hamorona ny volavolanao ianao, dia ho hitanao fa zavatra tsotra sy tsy lafo io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Misintona programa handrafetana T-shirt
Jaiko dia hoy izy:
Mamaly an'i jaiko
tsara hampiasa azy io ny programa. misaotra
yt dia hoy izy:
ps Te-misintona azy fotsiny aho hiteny lobaka
Valio i yt
ahoana no fampidirako azy
kyj dia hoy izy:
ny fomba fampidinana an'ity programa ity dia lazao amiko xfa
Ahoana no ahafahana misintona ilay programa?
toe-tsaina rahalahy dia hoy izy:
Mila programa handrafetana ny mugs izay programa azoko ampiasaina izay tsy photoshop na hofmman
Mamaly ny toe-tsaina rahalahy
Cloudya: Rafitra finday tsara indrindra
Ireo izay tompon'andraikitra amin'ny Series Yonkis tamin'ny farany dia navotsotra